के तपाईं वर्कआउटको पूरा फाइदा लिन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस यी उपाय – जीवन शैली
Home /टिप्स एण्ड ट्रिक्स/के तपाईं वर्कआउटको पूरा फाइदा लिन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस यी उपाय
शरीरलाई फिट एन्ड फाइन राख्नका लागि वर्कआउट गर्ने गरिन्छ। तर वर्कआउट गरेर मात्रै शरीरलाई फिट राख्न सकिँदैन। त्यसका लागि तपाईंले आफ्नो ख्याल राख्नु पर्दछ। आउनुहोस जानौँ वर्कआउटको पूरा फाइदा कसरी लिन्ने भन्नेबारेमा :
हेल्थ एक्सप‌र्ट्स र डाइटीशियन्सका अनुसार सन्तुलित भोजन र सही फिटनेस प्रोग्रामको तालमेल एकआपसमा जोडिएको हुन्छ। शरीर फिट राख्नका लागि केबल डाइट कन्ट्रोल गरेर मात्रै हँदैन। यसका साथै एक्सरसाइज पनि गर्नुपर्दछ। एक्सरसाइजको असर देखिनका लागि सही समयमा सही खानेकुरा खानु पनि पर्छ।
मजबुत हड्डीका लागि वजन उठाउने एक्सरसाइज गर्दा लाभ मिल्छ। त्यसका लागि प्रोटिन, भिटामिन डि र क्याल्शियमले भरिपूर्ण डाइट लिनु पर्दछ। दैनिक कम्तीमा पनि तीन पटक दुग्धजन्य पदार्थ सेवन गर्नु पर्दछ।
ब्रेकफास्टमा अंकुरित अनाज खाँदा राम्रो हुन्छ। बिहानको समयमा केही समय घाममा बस्नु पर्दछ। यसो गर्दा प्राकृतिक रूपमा भिटामिन डिको आवश्यकता पूरा हुन्छ। यदि तपाईंले भिटामिन डि समावेश भएको भरपूर खाद्य सामग्री भिटामिन डिको गोलीसँगै लिनुहुन्छ भने त्यसले नराम्रो असर पार्न सक्छ। यसो हुँदा शरीरमा क्याल्शियमको लभेल बढ्न सक्छ। यसो गर्दा किड्नीमा विपरीत असर पर्न सक्छ।
शरीरमा मांसपेशीहरू टुक्रिने र पुनः बन्ने प्रकिया लगातार चलिरहन्छ। तर ४० काटेपछि भने यो प्रक्रियामा विस्तारै कमी आउन थाल्छ। यो अवस्थामा व्यायामका साथै प्रोटिनयुक्त चीज, दाल तथा गेडागुडी, दूध र सोया उत्पाद धेरै सेवन गर्नु पर्दछ।
एक्सरसाइजभन्दा पहिला दुई गिलास पानी पिउनु स्वास्थका लागि लाभदायक मानिन्छ। खास गरी गर्मी मौसम पसिना अधिक निस्किँदा शरीरमा नुनको मात्रमा कमी आउन सक्छ। त्यसैले सोडियमयुक्त हेल्थ ड्रिन्क, लस्सीलगायतका पेयपदार्थ खुब पिउनु पर्दछ।
एक्सरसाइजका क्रममा समयसमयमा थोरैथोरै पानी पिउँदै रहनुपर्छ। यसो गर्दा थकान महसुस हुँदैन र तपाईं लामो समयसम्म वर्कआउट गर्न सक्नुहुने छ।
वजन घटाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला फ्याट बढाउने खानेकुरा र कार्बोहाइड्रेटबाट टाढै बस्नुपर्छ। त्यस्तै वर्कआउटका क्रममा स्पोर्ट्स ड्रिन्क पनि पिउँनु हुँदैन। प्रोटिनयुक्त खानेकुरा लिनु पर्छ किनकि प्रयोटिनयुक्त खानेकुरा खाँदा लामो समयसम्म भोकको महसुस हुँदैन। साथै फिट रहनका लागि सहायक मांसपेशीलाई बजबुत बनाउनुहोस्।
TAGS: #FitBody #Workout